बीच सडकमा यी युवतीको खुल्ला दादागिरी , एक ड्राइभरलाई लगातार ११ च’ड्कन लगाईन् – Gandaki Chhadke
बीच सडकमा यी युवतीको खुल्ला दादागिरी , एक ड्राइभरलाई लगातार ११ च’ड्कन लगाईन्
By गण्डकी छड्के Last updated Aug 28, 2021
पुरुषले नारी माथी हिंशा गरेको त सबैतिर सुनिदै आएको कुरा हो । तर भारतको लखनउमा एक केटीले एक ड्राईभर माथि ठुलै हिं’शा गरेकी छिन् । उनले ती ड्राइभर माथी खुल्ला बीच सडकमा लगातार कु’ट’पि’ट गरिरहन्छिन् तर अन्य ब्यक्ति भने मुकदर्शक बनेर बसिरहन्छन् ।
ति ड्राइभर आफैले पनि उनलाई गतिलै जवाफ दिन सक्थे तर महिला माथि हात लगाउन हुन्न भनेर एकदमै अडिएको भिडियोमा देख्न सकिन्छ । जेब्राक्रसबाट बाटो पार गरिरहेकी युवतीले गाडी नरोकेको भन्दै ती चालकलाई कु’टपि’ट गरेकी हुन् । उनले गाडी रोकेर ड्राइभरलाई गाडी बाट बाहिर नि’कालेर लगातार गा’ला फु’ट्ने गरी च’ड्काई रहन्छिन् ।
तर ती ड्राइभरले कुनै प्रतिक्रिया दिदैनन् । सादत अली नाम गरेका ट्याक्सी चालक एयरपोर्टबाट फर्कदै थिए। फर्कने क्रममा प्रि’यदर्शीनी नारायणले उनलाई बीच सडकमै ट्याक्सी रो’केर पि’टेकी थिइन् । उनले बीच सडकमा सबैबो अगाडी उनलाई निरन्तर च’ड्काई रहन्छिन् ।
भिडियोको अन्तमा एक जना छु’ट्याउन आएका ब्यक्ति संग पनि उनी जाई लाग्न खो’जेकी थिईन् । ती युवतीले ड्राइभर लाई लगातार ११ थ’प्पड हा’नेकी थिईन् ।
एमालेसँग एक्लै लड्न कसैले सक्दैन : ओली
एमसीसी खारेजी गर्न ७ दिने अल्टिमेटम नत्र जुनसुकै कदम चाल्ने !
जब लोक बहादुरका भाई नरेशले मलाई फ’साउन खो’ज्छस भन्दै आ’क्रो’शि’त भएपछी….
भोलिको राशिफल: ०७८ भदौ १६ गते बुधबार हेर्नुहोस राशिअनुसार तपाईंको भाग्य
भदौ तेस्रो सातादेखि देशभर सवारी चालक अनुमतिपत्रको परीक्षा
के हो विक्कीले प्रस्तुत गरेको ‘पेन्टोमाइम’,किन विवादमा परे सन्तोष पन्त ?